Ny soa azo avy amin'ny fampiasana SoonLink ARS.
1.Get feedback sy ny vokatra mora foana ary avy hatrany
2.Engage amin'ny mpihaino, ireo mpianatra
3.Liven ny ny famelabelaranao
5.Increase ny hihaino azy ny mpijery
Inona avy ireo tombontsoa ny SoonLink ARS?
1.2.4GHz matetika Wireless, tsy misy WIFI ilaina;
2.Long lavitra fifandraisana, hatramin'ny 100 metatra.
4.Classic Tantara fohy fandidiana natao sy interface tsara, tena mora ampiasaina.
5.Instant, marina vokatra ary koa voasoratra araka ny Excel ho an'ny fampiasana tatỳ aoriana.
6.No fetra ny fahafahan'ny mpampiasa.
7.Wonderful traikefa ny mampiasa amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza.
8.Low vidiny tokoa.
Inona no atao hoe tena andro Wireless rafitra mpanatrika valin-(ARS)?
Ny tena-ny mpanatrika valin rafitra dia rafitra ny fanangonana antontan-kevitra avy amin'ny plurality ny namaly no manana foibe anjara amin'ny afovoany processeur sy lehilahy iray tena ratsy tobin'ny sy lavitra anjara amin'ny plurality ny Wireless valin vondrona ho an'ny namaly mba hahazo bitsika mba hiditra valinteny antontan-kevitra ny maso ren'ny fandrenesana maneho izay mety ho aseho mivantana, amin'ny fahitalavitra Monitor, na mety ho mipetaka. Mety ho anisan 'ny fampisehoana safidy maro fanontaniana. Ny foibe processeur miangona ny valin-tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny fampielezam-peo, na Acoustic Optical fifandraisana rohy amin'ny lavitra venty, tsirairay izay manana adiresy tsy manam-paharoa. Ny foibe processeur mampiseho ny valiny voangony antontan-kevitra ara-potoana ary mety hapetaka amin'ny tahirin-kevitra sy ampiasaina valiny aseho avy maneho ny namaly.
Inona no azon'ny ARS ny SoonLink ampiasaina for?
Ny SoonLink ARS tanteraka ho an'ny isan-karazany ao anatin'izany ny fampianarana ny fampiasana fifandraisana, fivoriana vato sy ny fihaonambe fanadihadiana. Afaka ampiasaina koa ny mamela ny mpanatrika mba hanome hevitra mandritra ny fampiofanana ny mpiasa, ary mety atrikasa fanombanana. Isaky izay mila hifidy momba ny olana na manangona vaovao avy amin'ny olona maro be, SoonLink ARS no fomba tsara hanaovana izany.
Inona no SoonLink ARS javatra dia avy amin'ny?
Ny SoonLink ARS dia ahitana fitaovana sy ny rindrambaiko. Ny fitaovana ahitana ny anankiray maro Wireless fitendrin'ny (hatramin'ny 2000) ary ny Wireless mpandray sy ny USB tariby. Ny rindrambaiko azo nametraka amin'ny solosaina na inona na inona ny rafitra no mandeha Microsoft Windows na Mac OS.
Ahoana no fitendrin'ny miasa?
SoonLink Wireless fifidianana keypad dia manodidina ny haben'ny carte de crédit. Ny fitendrin'ny dia omena ny olona tsirairay ao amin'ny kilasy, ny fihaonambe na ny fivoriana. Ny fisaka sy mivelatra mifampiresaka amin'ny mofo-habeny Wireless mpandray izay mampifandray amin'ny alalan'ny solosaina ny USB tariby, fakàna ny valinteny mba misy fanontaniana tanteraka araka ny marina. Mety ho tena sarobidy fomba hanangona feedback araka ny mamela ny tsy mitonona anarana mihitsy valinteny izay tsy tarihin 'ny vahoaka. Ny vokatra ihany koa dia nandahatra sy aseho saika avy hatrany. Izany no haingana lavitra noho ny boky fampianarana ny fifidianana na ny fomba fanangonana hevitra.
Adiresy: Room 1407, Kingem Intelligence Building, Liuxian Street, Nanshan District, Shenzhen, Sina